यो नी कसिलो ब नाउन यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Health/यो नी कसिलो ब नाउन यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ !
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, व्यक्तिअनुसार नै शरीर र अङ्ग–प्रत्यङ्गका नाप र स्वरूपमा केही विविधता हुन्छ। अझ बच्चा पाएपछि योनी खुकुलो हुन्छ र सेक्स गर्दा मज्जा आउँदैन भन्ने भ्रम रहेका थुप्रै मानिस छन् ।
बच्चा पाएपछि केही समयका लागि योनीद्वार खुकुलो भए पनि यो बिस्तारै पुरानै साइजमा आउँछ । डेलिभरी हुँदा योनी च्यातिएमा त्यसलाई सिलाउने पनि गरिन्छ । योनीको तन्तुहरूको प्रकृति नै लिंगको साइजअनुसार एड्जस्ट हुने खालको हुन्छ । यो लिंगको साइजअनुसार संकुचन हुने र फुक्ने गर्छ ।
अधिकांश पुरुषलाई श्रीमतीले बच्चा पाएपछि उसको योनी खुकुलो भयो र सेक्स गर्दा मजा नआएको भ्रम हुन्छ, जसले गर्दा कतिपयको यौन जीवनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । मानिसहरू चरम यौन सन्तुष्टि पाउन अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छन् ।
कति पुरुष महिलाको योनी कसिलो नभएको कारणले यौन सन्तुष्टि नपाएको कुराले चिन्तित हुने गरेको पाइएको छ । कति पुरुष महिलाको योनीभित्र लिंग पसाउन गाह्रो हुने गरी कसिलो हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । महिला सम्भोगको लागि तयार नभएको अवस्थामा पनि योनी कसिलो हुन्छ ।
अर्को कारण, पर्याप्त मात्रामा प्राक्क्रीडा नगरेका कारण उत्तेजनामा आउन नसक्दा पनि योनी कसिलो हुन्छ । उक्त बेला योनीमार्गमा पर्याप्त मात्रामा यौन रस पनि निस्केको हुँदैन । यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क गर्दा महिलालाई पीडा हुन्छ । तर, पुरुषहरू चाहिँ कसिलो योनीमा सम्भोग गर्न पाएकोमा गर्व गर्छन् ।
वास्तवमा योनीमा तनावको कारण संकुचित भएकोले कसिलो भएको भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । अतः महिला सम्भोगको लागि पूर्ण रूपमा तयार हुँदा योनी सधैँ लचकदार हुन्छ । प्रायः महिलालाई ३० मिनेट जति प्राक्क्रीडाको लागि समय दिनुपर्छ । प्राक्क्रीडा गर्दा प्रेमपूर्ण रूपमा अंकमाल, चुम्बन, शरीरभरि स्पर्श गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यसो गर्दा महिलाको योनीको तनावपूर्ण संकुचन कम भई योनी लचकदार हुन्छ । यस्तो बेलामा उत्तेजित लिंग पसाउनु राम्रो हुन्छ ।
महिला उत्तेजनामा आएर सम्भोगमा उत्रँदा प्राकृतिक रूपमा नै योनी लचकदार हुन्छ । जुन बेला योनीको मांसपेशी तनाव नभएर विश्राममा हुन्छ, यस्तो अवस्थालाई पुरुषहरू महिलाको योनी लुज भएको ठानेर कुमारीत्व भंग भएकोसम्म सोच्ने गर्दछन् ।
यसले पुरुष—महिलाको सम्बन्धमा पनि खलल पैदा हुन सक्छ । यौन सम्पर्कबाट पुरुष र महिला दुवैलाई उत्तिकै आन्नद प्राप्त गर्न योनी संकुचन होइन लचकदार हुनुपर्छ ।
महिलाको योनीको खुकुलोपन सम्भोगपश्चात् कायम रहन्न । कतिपयले धेरै सम्भोग गरेर योनी खुकुलो भएको ठान्छन् । यो पनि गलत धारणा हो । सम्भोग धेरै वा थोरै गरेर योनी कसिलो वा खुकुलो हुने हुँदैन ।
योनीको मांसपेशीको विशेषता भनेको जस्तो आकारको लिंगसँग ठीक हुन सक्छ । त्यही सानो योनीबाट बच्चा जन्मन्छ । बच्चा जन्मिएको केही समयमा फेरि योनी पुरानै आकारमा पुग्दछ । यो नै योनीको विशेषता हो ।
केही महिलामा बच्चा जन्माएपछि योनीको मांसपेशी पुरानै आकारमा आउन समय लाग्ने वा केही खुकुलो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा योनीसम्बन्धी केही कसरत गर्न सकिन्छ ।
योनी कसरी कसिलो बनाउने : योनीको मांसपेशीलाई कसिलो पार्न यौन चिकित्सकहरूले केगेल कसरत गर्ने सल्लाह दिन्छन् । यो विधि आफैँले कुनै पनि बेला, कुनै पनि स्थानमा बसेर गर्न सकिन्छ ।
केगेल विधि गर्दा पिसाब फेर्दा मांसपेशीलाई खुम्च्याउने र पिसाब रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई सुरुमा एक सेकेन्डसम्म योनी खुम्च्याउने, खुकुलो बनाउने यसलाई बढाएर पाँच सेकेन्डसम्म पु¥याउनुपर्छ ।
बिस्तारै यसलाई १० देखि १५ सेकेन्डसम्म खुम्च्याउने, खुकुलो बनाउने गर्नुपर्छ । यसलाई दिनमा धेरै चोटिसम्म गर्न सकिन्छ । नियमित केही हप्तासम्म केगेल कसरत गरेमा योनीको मांसपेशीमा कसिलोपन आउँछ ।
यौनसम्पर्क गर्दा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला र पुरुषबीच हुने सम्पर्कमा दुबैले चरम सुख कसरी लिने भन्ने ध्यान केन्द्रीत रहन्छ । त्यसका पनि धेरै युवाहरुको जिज्ञासा भनेको योनी किन खुकुलो हुन्छ ? के कारणले खुकुलो हुन्छ अनि कसरी यसलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ ? भन्ने हुन्छ ।
अर्को कारण भनेको कहिले काँही योनीको वरिपरीको मांसपेशीहरु खुकुलो भएको पनि हुन सक्छ त्यसतो बेलामा तपाईले किलर्स एक्सरसाइज गर्नसक्नुहुन्छ अर्थात पिसाब फेर्ने बेलामा कोहि मान्छेले देख्यो भने जसरी हामीले पिसाब रोक्छौ त्यसरी नै यौनीको किलर्स एक्सरसाइज गर्नुपर्छ ।
किलर्स एक्सरसाइज भन्नाले जसरी पिसाब रोक्नुभयो त्यसरी नै तर पिसाब गर्ने बेलामा होइन कि बिहान दिउसो बेलुकामा बेलबिग्रोहको मसल्सलाई च्याप्म च्याप्प पारेर रोक्ने, एकपटक च्याम्प पारेर एकदेखि दश सम्म गन्ने अनि छोड्ने फेरी गर्ने अनि छोड्ने गर्नुपर्छ । यो कार्य बिहान दिउसो बेलुका गरेर दश प्रन्ध पटक नै गर्नुभयो भने यौनी कसिलो हुनसक्छ ।
तपाईको यौनी खुकुलो नभईकन पनि श्रीमानले खुकुलो भएको भनेर तपाईलाई नराम्रो व्यवहार गर्नुभएको छ कि ? यदि यस्तो हो भने तपाई यौन सम्पर्कको बेलामा पुर्णतया यौनसम्पर्कको लागि तयारी भएर यौनसम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो समस्या हट्नसक्छ ।
नेपालमा थप ८९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप १५ जनाको मृत्यु
के तपाईं निन्द्रा नलागेर स्लिपिङ ट्याबलेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् असर